Midowga Yurub oo ka hadlay doorashada Soomaaliya | Star FM
Home Wararka Soomaaliya Midowga Yurub oo ka hadlay doorashada Soomaaliya
Midowga Yurub oo ka hadlay doorashada Soomaaliya
Wadamada Midowga Yurub ayaa War kasoo saaray xaaladda siyaasadeed ee dalka Soomaaliya iyo arrimaha doorashooyinka oo lagu heshiin waayay, xili uu dhammaaday muddo xilkeedii Madaxweyne Maxamed C/laahi Farmaajo.
Qoraal uu soo saaray Wasiirka Arrimaha Dibadda Midowga Yurub Josep Borrell ayaa waxaa lagu sheegay in heshiis la’aan lagu qabto doorashada Soomaaliya ka dhaceysa ay tahay arrin culeys ah oo marnaba wax dan ah ugu jirin shacabka Soomaaliyeed.
Wuxuu intaas ku daray inay muhiim tahay in xal laga gaaro khilaafka hareeyay qabsoomida doorashooyinka, ayna Madaxda dowladda Federaalka iyo kuwa maamul Goboleedyada yeeshaan wada-hadal, si xal looga gaaro hirgelinta geeddi-socodka doorashooyinka.
Heshiis la’aanta in la qabto doorasho ka dhacda Soomaaliya waa mid aad u culus oo aan dan ugu jirin muwaadiniinta Soomaaliyeed. Waa muhiim in dhammaan ka qeybgalayaashu ay sii wadaan inay si wax ku ool ah ula shaqeeyaan si ay uga heshiiyaan hirgelinta geeddi-socodka doorashooyinka qaran.
Hoggaamiyeyaasha siyaasaddu waa inay sii wadaan dadaalkooda ku aaddan hirgelinta heshiiskii 17-kii Sebtember ayaa lagu yiri warka Midowga yurub ka soo baxay.
Previous articleAadan Barre oo sheegay in aynan fududeyn xilka qaadista William Ruto
Next articleDHAGEYSO:Xarunta maamulka deegaanka Janaale oo xariga laga jaray